Sambo rendrika tao Marovoay: Tafakatra 11 ireo faty hita hatramin'izao
jeudi, 25 octobre 2018 23:05
Anisan'ireo mpandeha tsy hita popoka nandritra ny fahadoboan'ilay sambo ANJARA tao Marovoay afak’omaly ireo. Vehivavy ny 5 tamin'ireo ary lehilahy ny 6.
Midina any an-toerana hatramin'ny Antokon-draharaha misahana ny fifamoivoizana an-dranomasina sy an-dranomamy na APMF (Agence Portuaire Maritime et Fluviale) avy any Antananarivo manampy manao fikarohana ireo razana.
Raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny APMF dia misy hatrany ny solontenan'izy ireo manara-maso ny fiaingan'ny sambo ao Antafia Marovoay saingy nangala-dia ity sambo ity ka tany amin'ny toerana lavitra ny tafia no niainga, tamin'ny toerana antsoina hoe: Madirokely.
Nisy rahateo, raha ny fanazavana, ny fifampigafiana teo amin'ny tompon'ny sambo sy ny mpanamory. Nilefa aty Mahajanga ilay mpanamory raha vao niseho ny loza araka ny fanazavana hatrany.
Toerana nifanalavitra avokoa no nahitana ireo vatana mangatsiaka ary mbola miara-misalahy amin'ny fikarohana hatrany ny Fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana ary ny manam-pahefana any an-toerana sy ny APMF.
Mbola tavela anaty rano hatramin'izao ny sambo ANJARA, manano-sarotra ny hitarihana azy satria efa tafiditry ny fasika sy ny fotaka, ahiana ho mbola hisy faty tavela ihany koa ao anatiny.
Tsy mbola misy fanapahan-kevitra noraisina mahakasika ny mpanamory sy ny tompon'ny sambo fa mbola mikaroka ireo mpandeha tsy hita ny rehetra.